Ani zvake anofarira kubhururuka pavhavha yangu achishandisa JoinFS uye LOTS yeAI ???
mubvunzo Ani zvake anofarira kubhururuka pavhavha yangu achishandisa JoinFS uye LOTS yeAI ???
10 mwedzi 1 zuva kare #900 by fltbuff71
Ona webhusaiti fsxflywithmanyai.weebly.com kuti uwane mamwe mashoko
Ichagadzirisa boka rekutiza munharaunda iri pedyo nekusvika kana kufarira kwakakwana.
Ndinoshandisa Rikooo zvinyorwa zve 737 uye 747 zvinyorwa zvose
Hazvikwanisi kubhururuka AI mumatauriri akawanda paStam, asi JoinFS yakakura uye iwe unogona kubhururuka Steam, Bhokisi, kana chero imwe ndege ye Flight Sim mubasa rekusununguka.
Handizoshandisi TeamSpeak uye zvinoratidzika sokuti vanobhadharira seva iye zvino ....
Kana uchida, rega ndidzidze
Ona mapikicha akabatanidzwa neni achitaura naAi Flight Planner. .my server, uye JoinFS
8 mwedzi 4 masvondo apfuura #996 by fltbuff71
Ndiri kuwedzera DISCORD
kutsvaga chero chido chekubatana neni pane iyi server mune MARCH 2018 seboka flilght, ine mapepa akawanda AI, iwe pachako, uye uchishandisa DISCORD ???????
8 mwedzi 4 masvondo apfuura #1003 by fltbuff71
8 mwedzi 3 masvondo apfuura #1007 by fltbuff71
Time chokusika peji: 2.627 mumasekonzi